टुँडिखेलमा खगेन्द्रले लगाए ‘ठ्याक’
बैशाख २१ गते प्रदर्शनमा आउने सिनेमा ‘डमरुको डन्डीबियो’को दर्शकमा प्रतिक्षा व्यग्र छ । ट्रेलर रिलिज भएसँगै हाइप बनाएको सिनेमाले प्रचार–प्रसार पनि व्यापक बनाइरहेको छ । पुर्व राष्ट्रिय खेल डन्डीबियोमाथि आधारित ...
फूल फुल्ने ३१२ प्रजातिका वनस्पति नेपालमा मात्र
विभिन्न प्रजातिका फूल फुल्ने वनस्पतिमध्ये ३१२ प्रजाति नेपालमा मात्र पाइने गरेको छ। वनस्पति विभागले दिएको जानकारीअनुसार पाँच हजार ३०९ फूल फुल्ने वनस्पतिमध्ये नेपालमा मात्र ३१२ प्रजाति पाइने गरेको हो । जसमध्ये ग...
आफ्नो देशको सीमा मिचिँदा समेत किन मौन छ नेपाल सरकार ? (भिडियो)
भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले फेरी एकचोटी नेपाल र नेपालीमाथि आफ्नो दादगीरी देखाएको छ। आफ्नो मुलुकको जमिनमा लागएको काँडे तार यसरी गुण्डागर्दी शैलमिा घिर्सादै लगिएको छ जसलाई देख्दा लाग्छ हामी निकै लाचार छौँ। ...
चलचित्र ‘काले दाई’को पहिलो गीत ‘राइफलको सिरानी’ सार्वजनिक
चलचित्र ‘काले दाई’को पहिलो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । ‘राइफलको सिरानी’ बोलको गीत लोकलयमा निर्माण गरिएको छ । गत वर्ष रिलिज भएको ‘पर्व’ सिनेमामा समावेश हिट गीत ‘काले दाई’बाट नाम सापटी लिएर बनाएको चलचित्रलाई शिव शर्...
पौडन पनि अब्बल छन् अशोक दर्जी, हेर्नुहोस् भिडियो
अशोक दर्जी यतिबेला सर्वत्र चर्चाको शिखरमा रहेका छन् । युट्युब च्यानलहरूकै कारण उनले आफ्नो सुनौलो भविष्य प्राप्त गरेका छन् । उनले बाटोमा गीत गाउँदै गरेको भिडियो भाइरल भएपछि उनी एकाएक चर्चामा आएका हुन्। उनको सडक ...
टिभी, पत्रिका अनि रेडियोमा हामीले धेरैजसो गोरो र चम्किलो छालाका लागि आएका कसमेटिक्स सामानहरुका विज्ञाजन देख्दै अनि पढदै सुन्दै आएका छौ । के सुन्दरता त्यती महँगो छ त ? परापुर्वकालमा अदभुत सुन्दरिहरु यी व्यवसाहीक...
औषधिविहीन स्वास्थ्य चौकी, एक चक्की सिटामोलको रु सात, किन्न बाध्य दुर्गमका बिरामी
औषधि अभावमा दुर्गमका बिरामी समस्यामा परेका छन् । स्वास्थ्य चौकीले सिटामोलसमेत उपलब्ध गराउन नस्कँदा दहबगड, काँडा, भामचौर, गडराय, धमेनालगायतका दजनौँ स्वास्थ्य चौकीमा उपचार लिन आउने बिरामी समस्यामा परेका हुन् ।...
दक्षिणी भारतको आन्ध्र प्रदेशमा यो साता चट्याङ्गले रेकर्ड तोडेको छ। अधिकारीहरुका अनुसार आन्ध्र प्रदेशमा मंगलबारका दिन मात्र १३ घण्टामा ३६ हजार ७ सय ४९ पटक चट्याङ्ग प-यो । राज्यको आपतकालिन प्रबन्धन विभागका अनु...
सलमान यसरी ज्याकलीनसँग रोमान्स गर्दैछन्
सलमान खान जेल बाट रिहा भएदेखी नै शुटिङमा निक्कै ब्यस्त हुन थालेका छन् । उनको लगातार ३ चलचित्र क्युमा रहेकोन छ । सलमान यस समयमा जम्मू कश्मीरमा आगामी चलचित्र ’रेस ३’ को शूटिंग गर्दैछन् । उनले अहिले ज्याकलीन फर...
सबैभन्दा महंगो बजेटमा निर्माण हुन लागेको फिल्म
सुन्दर मुस्कान र अब्बल नृत्यले परिचित बलिउड अभिनेत्री माधुरी दीक्षितले पूर्व प्रेमीसँग जोडी बाध्ने भएकी छिन्। करण जौहरले सबैभन्दा महंगो बजेटमा निर्माण गर्न लागेको फिल्म ‘कलंक’मा माधुरीले पूर्वप्रेमी सञ्जय दत...